Thwebula Music Player 2.8.2 isizulu – Vessoft
Thwebula Music Player
Music Player – a elula music player ngokusekelwa okuningi athandwayo. Music Player inikeza Equalizer enamandla futhi ivumela sifeze Ukucinga Okusheshayo lwamafayela omculo. Isofthiwe sizikhandle uhlukanisa amathrekhi amaqembu futhi likuvumela ukudala izinhla zokudlala. Music Player sihlanganisa amawijethi eziningana ukubonisa umculo amafayela kwideskithophu. Isofthiwe ine lula ukusebenzisa interface futhi ikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso isithombe background.
Usekela takhiwo athandwayo
Amazwana on Music Player:
Music Player Ahlobene software: